Hollywood Wazibeka Amampunge ebusweni Mirror kunye Izibane Large Dressing Table-top Beauty Mirror
Hollywood IZIPHUMLISI IZE Mirror
I Hollywood makeup isipili khetha wokuvala ukukhanya ekukhanyeni imini, ukuba siqonde ngcono ukuba iqondo umthunzi, kwi ukubunjwa ukuqinisekisa umbala olufanayo. Kwaye ungasebenzisa esipilini makeup zikwimeko mnyama.
Le Iibhalbhu LED omtsha owadalwa BEAUTME kakhulu amandla-ugcino kunye nokusingqongileyo, yaye kube lula ukuba indawo.
Eziphambili Mirror BASE
It has indawo zogcino nezincedisi yakho makeup. Okuzenza kunye noyilo lula, kukho 2 kumazibuko USB kwicala ngenxa sokutshajisa mobile phones njalo njalo.
SMART ZASEMGCENI ULAWULO
Intelligent uyilo touch ukufiphala, ukwanelisa intswelo yakho ukukhanya ukukhanya ezahlukeneyo kwiindawo ezahlukeneyo ubuso.
Hollywood Wazibeka Ilize Mirror
Kwamanina namantombazana, Ukuba enjalo A Amampunge Mirror Is Dream Lwabo
I Hollywood style makeup isipili yi iqhekeza grade salon, kuba izixhobo makeup professional kuba inkwenkwezi kunye makeup artist. Isakhelo senziwe i-aluminiyamu ingxubevange ophezulu ezikumgangatho kunye nenkqubo zokutshiza ngamandla kwaye ngokugqibeleleyo elahla naziphi na nentwana ukuthunga phezu isakhelo, ukudala isakhelo ogqibeleleyo kwaye sijonge ngakumbi ophezulu-grade kunye ezintle.
Oku kuzakuvumela ukuba ugcwalise ucwangciso lwakho ubuhle ngokugqibeleleyo, kungakhathaliseki ukuba ixesha losuku, ndininike uzive inkwenkwezi kwaye dream ingamampunge elimisiweyo. Siqinisekile ukuba umgangatho iimveliso zethu kwanele leyo iniqubule nje kusinika ithuba.
Ukukhanya: ukukhanya adjustable
Power: DC12V / 2A Plug-in kagesi
3 Amaqondo obushushu Umbala izibane LED: begcakamele esimthubi (3200k) & begcakamele amhlophe (4800k) & ukukhanya ngosuku omhlophe (6500k)
ubukhulu Glass: 697mm (L) * 547mm (H) / (27.44 "* 21,53");
ubungakanani Product: 720mm (L) * 120mm (W) * 565mm (H) /28.35 "* 4.72" * 22.2 ";
Mirror Ubunzima: malunga 9kg
Iipakethe Iinkcukacha: EPE Foam + Box Package
1 * makeup isipili kunye nezibane; 1 * thina plug-in kagesi; 12pcs wakhokela ezonga; 1 * guide yomsebenzisi
Hollywood Style Wazibeka Tabletop ebusweni Mirror, ...
Hollywood Amampunge ebusweni Mirror Tabletop okanye Wall ...
Ngamampunge jiko eziBengezelayo , Makeup Mirror Ngokukhanya eziBengezelayo, Amampunge Mirror Ngokukhanya eziBengezelayo, Mirror Ngokukhanya eziBengezelayo ,